श्रीमतिको उपचार गर्न नसकेपछि श्रीमानद्धारा विष सेवन – Gulmiews
श्रीमतिको उपचार गर्न नसकेपछि श्रीमानद्धारा विष सेवन
९ फाल्गुन २०७२, आईतवार १२:१८ Sanju Kauchha
No comments	मन्त्रीहरु र जनताहरुको विमार एउटै होईन र ?
गुल्मी, फागुन ७ । सम्पतीका नाममा चारैतिर वाँसले वारेको सानो झुपडी । त्यस झुपडी अगाडी, पछाडी खुर्सानी लगाउने ठाउँ सम्म छैन । तिन सन्तान पालन पोषण गर्ने भनेकै ति दम्पत्तीका पाखुरा थिए । विहान पाँच वजे उठ्नु श्रीमान श्रीमति उर्लेनीमा ढुङ्गा फोर्न जानु र साँझा त्यसको ज्यालाबाट चुलो जलाउनु उनिहरुको दैनिकी थियो ।
त्यो पनि अहिले गत सात महिना देखि रोकिएको छ । श्रीमान श्रीमती दुवै थला परेका छन । पेट पाल्न मुस्कील परेपछि १३ वर्षिय छोरा स्कुल छाडेर छिमेकीको सहयोगमा दिल्लीको जुठा भाँडा माझ्न पुगेका छन् । यता १० ÷ १२ वर्षिया छोरी तानसेन तम्घास सडक खण्डको उर्लेनीमा थाल थापेर भिक माग्दै ज्यान पाल्ने गरी रहेका छन् ।
उर्लेनी भन्न वित्तिकै ढुङ्गा खानी र मजदुरहरुको गाउँ भनेर चिनिन्छ गुल्मीको सदर तम्घास नजिकै पर्ने साविकको दुविचौर गाविस वडा नम्वर ९ । जुन स्थान दुई बर्ष अघि रेसुङ्गा नगरपालिका बने पनि त्यहाँका मजदुरहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । रे.न.पा.–१४ नयाँ नाम पाएको त्यस उर्लेनीमा एकाधा भारतिय सेनाका जागिरे वाहेक अरुको अवस्था दयानिय छ ।
तिनै दयानिय उर्लेनीवासी मध्येका एक हुन् ३५ वर्षिय कृष्णबहादुर तङनामी मगर र उनकी ३० वर्षिया श्रीमति हिमा तङनामी मगर । जस मध्ये हुर्के देखि गत भदौ सम्म कृष्णबहादुरले उर्लेनीको त्यसै ढुङ्गखानीमा पसिना बगाए र उनकी श्रीमतिले पनि विवाहको १५ वर्ष देखि श्रीमान संगै गिटी कुट्दै जिविका चलाउँदै आएकी थिईन् ।
यहि क्रममा गत भदौ २४ गते दिनभर िगिटी कुटेर साँझ दाउँरा घाँस बनाउने क्रममा त्यस नजिकै पर्ने हक्नेछहराको रुखमा चढेको केहिवेरमै लडिन र ढाड र पेटमा गम्भीर घाईते बनेर उनि थला परिन् । उनलाई छिमेकी एवं रेसुङ्गा नगरपालिका १४ की वडा नागरिक मञ्चकी संयोजक खिमा बस्नेतले तम्घास पाल्पा हुँदै वुटवल सम्म उपचारका लागि पुराईन् ।
आफ्नो तर्फबाट करिव एक लाख खर्च गरिन तर त्यो रकमले हिमाको उपचार सम्भव नभए पछि घर फर्काउन बाध्य भईन् । दैनिक ढुङ्गा फोरेर परिवारको गुजरा चलाउन मुस्कीलमा परेका कृष्णबहादुरले थला परेर जिवन दुहाई मागेकी श्रीमतिको चित्कार सुन्न नसकेर एक महिना अघि विष सेवन गरे । विष सेवनबाट मरण तुल्य अवस्थामा तम्घास हुँदै पाल्पा सम्म पुराईका उनलाई बचाउन सकिए पनि काम गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
उनि भन्छन् –‘ दिन रातै श्रीमति मलाई बचाउनुस्…बचाउनुस्….भनेर रुन्छे –कल्लाउँ छे । मेरा साथमा सुको पैसो छैन । साहुले पनि पत्याएनन् । सम्पत्तीका नाममा यहि वास हो । सवै संग हार गुहार गरे । छिमेकी दिदी खिमाले एक लाख जति सहयोग त गर्नु भयो तर त्यसले श्रीमतिलाई बचाउन नसक्ने देखेपछि म श्रीमान भएर बाँच्नुको अर्थ नदेखेर विष खाएर मर्न चाहेको हुँ तर काल आएन् ।’
उनले थपे–‘ पढ्दै गरेको छोरा विशाल स्कुल जाने उपाए नभए पछि सडकमा थाल थाप्दा थाप्दै मागेका भारततिर हिड्यो । त्यहाँ पुग्यो भन्ने मात्रै सुनेको छु तर कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने थाह छैन् । यि दुई छोरीहरु र ति थला परी रहेकी श्रीमतिको रुवावासी सुन्दा अझै पनि बाँच्ने मन छैन् ।’
त्यस परिवारको अवस्था दर्दनाक भए पछि वडा नागरिक मञ्चकी संयोजक खिमा वस्नेत र अन्य स्थानिय समाज सेवीहरुले यस समाचारदातालाई बोलाए पछि त्यो विचल्लीको खवर रिर्पोटिङ्ग गरेर फर्किएको छ । त्यहाँ पुग्न वित्तिकै ति वालिकाहरुको ति महिला र उनका श्रीमान ,छोरीहरुको रुवावासीले सवैको आँखा रसाए ।
वडा संयोजक खिमा बस्नेतले गहभरी आँशु पार्दै प्रश्न गरिन्– ‘ सर यो देशका मन्त्री , प्रधानमन्त्री र यि गरिव जनताको विमार एउटै होईन र ?’ उनले प्रति प्रश्न गर्दै भनिन् – ‘सर्वहारा जनताका नेता भनिएका प्रचण्ड, वावुराम , गरिवहरु कै पार्टी भनिएका एमालेका नेता केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ र लोकतन्त्रिक पार्टी भनिएका कांग्रेसका शुसिल कोईराला , देउवाहरु प्रधान मन्त्री भयो कि उपचारका लागि विदेश जानै पर्ने र करोडौ रकम उपचार खर्चमा लाग्ने तर यि जनताले भने स्वेदशमै उपचार नपाउने यो कस्तो विडम्वना हो ? ’
हुन पनि सात महिना भयो सदरमुकाम नजिकै त्यो परिवारको त्यो विचल्ली परेको । वडा संयोजक वस्नेतले नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका संस्थापक अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठसंग त्यो विजोग सुनाईन । श्रेष्ठले यस समाचारदातालाई भेट्न पठाए र उनि आफैले पनि आग्राह गरेर सहयोगको अपिल गरे । यो समाचारदाता त्यहाँ पुगेर त्यो विचल्ली देखे पछि अस्पताल पठाउँनै पर्ने देख्यो ।
पठाउनका लागि साथमा पैसा थिएन । उपाय खोज्यो । सोही वखत पोखराका विमल केसी जसले कोरियाबाट अस्पतालको विल तिर्न नसकेर १२ दिनको नवजात शिशु अस्पतालमै छाडेर गाउँमा ऋण खोज्न हिडेकी थिईन । उनलाई पठाएको सहयोग पाँच हजार रुपैयाँ तत्काललाई ति उर्लेनीकी हिमालाई दिन आग्राह ग¥यो र उनलाई काठमाण्डौको विर अस्पतालमा पठाईएको छ ।
उनको अवस्था चिन्ताजनन रहेको छ । उनको प्राण बाँचे ति नावालिकाहरु विचल्ली हुनबाट बच्ने थिए भन्ने प्रयास हो । उनको ढाड देखि तलको शरिर नचल्ने भएको छ । थातै दिशा विशावले उनको त्यो झुपडीको साँघुरो कोठा दुर्घन्धित बनेको छ । विष सेवन गरेका श्रीमान कृष्ण टाउँकोमा परेको असरले अर्धपागल जस्तै बनेका छन् । उनिहरुको जिवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न चाहनु हुने महानुभावले वडा संयोजक खिमा वस्नेतको मोवाईल नम्वर ९८४७४६५०४८ माा सम्पर्क गर्नु होला ।
उहाँको फोन नलागेको खण्डमा यस समाचारदाताको मोवाईल नम्वर ९८५७०६१५३० मा पनि सम्पर्क राख्न सकिने छ । त्यो परिवारको विचल्ली प्रति राज्यले आँखा चिम्ले पनि हामी सर्वसाधरण नेपालीहरुले एक चोटी नियालौं र सहयोग गरौं भन्ने हामी आग्राह गर्दछौं ।
तस्वीरः विचल्लीमा परेका त्यस परिवारको अवस्था…………..
@gulminewsयसरी तोकिदै छन् गुल्मीका स्थानिय निकायका केन्द्रहरु https://t.co/YbUbPqRxf6 #Gulminews #Gulmi16 mins agoRetweetके महिनावारी पर सार्ने औषधिको प्रयोग स्वास्यको लागी राम्रो हो ? https://t.co/UeLxyZxVE9 #Gulminews #Gulmi6 hours agoRetweetनेपाली सेनाले १९ घन्टामै बनायो गुल्मी-बाग्लुङ जोड्ने पुल https://t.co/z6jo9pWSLx #Gulminews #Gulmi21 hours agoRetweetगुल्मीमा मनायो सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो १६ औ बार्षिकोत्सव https://t.co/JCrko0qUHq #Gulminews #Gulmi22 hours agoRetweetएमाले परित्याग गरी दर्जनौ कार्यकता माओवादीमा प्रवेश https://t.co/8GsVEIMxme #Gulminews #Gulmi1 day agoRetweet	गुल्मीको मौसम	Mostly Sunny	16 °C	29 Oct 2016